Sludge metal - ဝီကီပီးဒီးယား
Sludge metal (တစ်ခါတစ်ရံ sludge) သည် ပြင်းထန်သော မျိုးခွဲဂီတဖြစ်ပြီး doom metal နှင့် hardcore punk တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ sludge metal သည် စူးရှပြီးနှင့် ကြမ်းတမ်းသည်။ မကြာခဏ အော်သံ (သို့) စူးရှသောအဆို၊ လေးလံသော distorted instruments နှင့် sharply contrasting tempo တို့ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။
Doom metal, hardcore punk, Southern rock, grunge
၁၉၈၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
လျှပ်စစ်ဂစ်တာ၊ ဘေ့စ်ဂစ်တာ၊ ဒရမ်များ၊ အဆိုရှင်များ၊ ကီးဘုတ်
၂.၂ အစောပိုင်း sludge
sludge metalသည် ယေဘုယျအားဖြင့် slow tempo များ၊ rhythm များနှင့် dark pessimistic atmosphere of doom metal နှင့် aggression, အော်ဟစ်သံနှင့် occasional fast tempo of hardcore punkများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ The New York Times တွင် အစောပိုင်းတွင် Black Sabbath နှင့်နောက်ပိုင်း Black Flag တို့မှ ဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ sludge ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှေးကွေးပြီး ထူထပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ sludge တီးဝိုင်းများသည် slow-paced သီဆိုရေးဖွဲ့ကြသည်။ ၎င်းမှာ အတိုချုပ်ဖြစ်သော hardcore passage (ဥပမာ Eyehategod ၏ Depress နှင့် My Name is God) Mike Williams (a founder of the sludge style and member of Eyehategod) noniker of sludge style သည် သိရသရွေ့ slowness, dirtiness, filth နှင့် General feel of decadence the tunes တို့ဖြင့် သယ်ဆောင်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ တစ်ချို့တီးဝိုင်းများသည် သူတို့၏ဂီတကို တောက်လျှောက် fast tempoများကို အလေးထားသည်။ string instruments (လျှပ်စစ်ဂစ်တာ နှင့် ဘေ့စ်ဂစ်တာ)သည် downtunedနှင့် heavily distorted နှင့် ထူထပ်၍ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသော အသံများကို ထုတ်လုပ်ရန် မကြာခဏ ကြီးမားသော feedback များဖြင့် တီးခတ်ကြသည်။ ထို့ပြင် guitar solo များမှာ မရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ ဒရမ်တီးခတ်ပုံသည် doom metal fashion ပုံစံဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။ ဒရမ်သမားများသည် လျင်မြန်သော passage တစ်လျှောက်လုံး hardcore D-beat (သို့) double-kick တီးခတ်ပုံ(သို့) ထူထဲသော breakdownများ vocal များမှာ ထုံးစံအတိုင်း အော်ဟစ်သံ(သို့) စူးရှသံများနှင့် စာသားများမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် သဘာဝတရား၏အဆိုးမြင်ဝါဒများ၊ ဝေဒနာခံစားရခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုကွန်ယက်များသို့ ဒေါသဖြစ်စေခြင်းများကို ဖွဲ့ဆိုကြသည်။
Sludge metal တီးဝိုင်းအများစုသည် တောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဖြစ်ပြီး souther rock လွှမ်းမိုးမှုများ ပေါင်းစပ်ကြသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမှာ နယူးအော်လီယန်းမြို့ နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် American South မှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း၊ Black Flag, Black Sabbath တို့ ဦးဆောင်နိုးကြွမှုတို့ဖြစ်သည်။ atmospheric sludge တီးဝိုင်းများကို ပို၍ စမ်းသပ်လေ့လာလာခြင်း၊ ambient atmosphere နှင့်အတူ ဂီတကို ဖွဲ့ဆိုခြင်း၊ aggression နှင့် ဒဿနိကဗေဒနှင့်ဆိုင်သော စာသားတို့ဟု ခေါ်သည်။ sludge နှင့် stoner metal ကြားတွင်ဆင်တူသောကြောင့် ဤဂီတနှစ်ခုကြား မကြာခဏပုံစံပြောင်းသည်။ သို့သော် sludge metal သည် ယေဘုယျအားဖြင့် stone metal ၏ psychedelia ကို ရှောင်ကြသည်။ sludge metalသည် crust punkနှင့်ဆိုင်သော ဂီတဆိုင်ရာစာသားများ ပါရှိသည်။
Black Flag နှင့် Black Sabbath နှင့်အတူ ဂီတသမားများသည် Mississipi John Hurt, Lynyrd Skynyrd, Greg Ginn, Trouble, Carnivore, Saint Vitus, Gore, Righteous Pigs, Amebix နှင့် Swans အစရှိသော ဤပုံစံတီထွင်သူများ၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို ကိုးကားထားသည်။ အစောပိုင်း sluge metal အုပ်စုများ၊ Industrial ဂီတာအုပ်စုများဖြစ်သော SPK, Throbbing Gristle, Chrome နှင့် Swans များမှ ချေးငှားခဲ့သည်။
အရေးပါသော လွှမ်းမိုးမှုမှာ Washington မှ တီးဝိုင်း Melvins ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့၏အစောဆုံး ထုတ်လွှင့်မှုများဖြစ်သော SixSongs (၁၉၈၆)နှင့် Gluey Porch Treatments (၁၉၈၇) တို့သည် ပထမဆုံး sludge record အဖြစ် ယူဆနိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင် တီးဝိုင်းမှာ Washington grunge အဖြစ်အပျက်ထဲမှ အရေးပါသော အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့၏ဒုတိယမြောက် dirt နှင့်အတူ အစောပိုင်း sludge သို့ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ Oakland မှ Neurosis သည်လည်း အရေးပါခဲ့သည်။
၁၉၉၀ အစောပိုင်းတွင် လူဝီစီယားနားပြည်နယ်မှ တီးဝိုင်းအများစုကြောင့် ဤပုံစံမှ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ပြီး sludge ဟု သိစေခဲ့သည်။ Eyehategod (၁၉၈၈ တွင် တည်ထောင်), Crowbar (၁၉၈၉ တွင် တည်ထောင်) နှင့် Acid Bath (၁၉၉၁ တွင် တည်ထောင်) အမျိုးအစားသို့ ရွေးချယ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Sludge metalသည် နောက်ပိုင်းတွင် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဖြတ်၍ပြန့်နှံ့သွားသည်။ တိုက်ဆိုင်မှု(သို့) sludge ကမ္ဘာကြီးအတွက် အရေးကြီးသော တံခါးဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဂျပန်အုပ်စု Corrupted နှင့် ခေတ်ပြိုင် အမေရိကန်အုပ်စုဖြစ်သည့် Dumb Numbers, Lair of the Minotaur, Old Man Gloom နှင့် Kylesa တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ Mastodon, Baroness, Black Tusk နှင့် Kylesa တို့သည် ဂျော်ဂျီယာ၏ အဓိက sludge အုပ်စုအရင်းဖြစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း sludge metal တီးဝိုင်းများသည် post-rock အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ post-metal သို့ဆင်တူသော နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်စေခဲ့သည်။ post-rock နှင့် sludge ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် post-metal တီးဝိုင်းများစုသည် post-rock နှင့် modern heavy metal ကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သော်လည်း ဤအချက်သည် post-metal မှ ကွဲပြားစေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းအတောအတွင်းတွင် Neurosis တီးဝိုင်း၏ စမ်းသပ်လေ့လာမှုနှင့်အတူ post-rock/sludge crossver သည်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည့် အရေးပါသော တီးဝိုင်းမှာ Isis, Cult of luna နှင့် Pelican တို့ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ AllMusic: Doom Metal။ AllMusic။ 2012-11-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Huey, Steve။ Eyehategod။ AllMusic။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ York, William။ Eyehategod - In the Name of Suffering။ AllMusic။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Sludge Special", p. 43.
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ York, William။ Eyehategod - Dopesick။ AllMusic။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ York, William။ Eyehategod - Take as Needed for Pain။ AllMusic။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ York, William။ Soilent Green - Sewn Mouth Secrets။ AllMusic။ 2010-05-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jeffries, Vincent။ Crowbar - Crowbar။ AllMusic။ 2008-09-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Huey, Steve။ Corrosion of Conformity။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ York, William။ Soilent Green။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Downey, Ryan J။ Isis။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Serba, John။ Bongzilla - Gateway။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “…sounding likeacross between Sleep's drowsy, Black Sabbathy meanderings and Electric Wizard/Burning Witch-style gut-curdling, muddy sludge.”
↑ Mason, Stewart။ Kylesa။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “…elements of hardcore punk, psychedelic stoner rock, technical speed metal, and good old-fashioned Black Sabbath sludge appear in their music.”
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ "Sludge Special", p. 44.
↑ "Sludge Special", p. 51.
↑ Huey, Steve။ Crowbar။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ York, William။ Acid Bath။ AllMusic။ 2008-09-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Sludge_metal&oldid=688459" မှ ရယူရန်
၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။